China Cheese Vat Factory, mpamatsy fraomazy fromazy
Raha misafidy ny manomboka amin'ny ronono ianao ho toy ny singa iray, dia ilaina ny VAT fromazy. Ny asany lehibe indrindra dia ny fifangaroan'ny ronono sy ny fanomanana ronono ronono; ireo dingana ireo no fototry ny fromazy nentim-paharazana.
JINGYE Cheese Vat dia miantoka ny fikirakirana tsara ny curd, fanaovana fanapahana malefaka ary hetsika mampihetsika.
Ny fikorianan'ny vokatra malefaka sy maharitra dia mampihena ny sombintsombin'ny sombintsombin'ny curd ary misoroka ny fametrahana ny fitaovana eo amin'ny farany ambany.
Namboarina tamin'ny vy tsy miova SUS 304/316, miaraka amina rafitra manafana / mampihena ary miaraka amina rafitra fanadiovana mandeha ho azy CIP.